အသံစက်ပစ္စည်းများသည်ဒိန်းမတ်အသံအသံလွှင့်စက်အယ်လန်ဟော့မန်းနှင့်အမီလိုက် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အသံဖုန်းများအတွက်ဒိန်းမတ်အသံ Recordist အယ်လန် Holmberg နှင့်အတူခြေလှမ်းသိမ်းထားပြီး
အသံဖုန်းများအတွက်ဒိန်းမတ်အသံ Recordist အယ်လန် Holmberg နှင့်အတူခြေလှမ်းသိမ်းထားပြီး
ကိုပင်ဟေဂင်, ဒိန်းမတ်, စကျတငျဘာ 24, 2015 - အသံ recordist အယ်လန် Holmberg ဤသည်နေ့ရက်ကာလတစ်အလုပ်များသူဖြစ်၏။ အင်္ဂါရပ်ဇာတ်ကားအဘို့အ On-set ကိုအသံနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုဖမ်းယူဖို့ကမ္ဘာကြီးကိုခရီးသွားလာသို့မဟုတ်သူ၏ဇာတိဒိန်းမတ်အတွက်လူကြိုက်များတဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်များအပေါ်အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိ, Holmberg အပေါ်မှီခို အသံဖုန်းများအတွက် အလုပ်အမှုကိုပြုရ။ တပ်ဆင်ထား အသံဖုန်းများအတွက်'' 788T အသံအသံဖမျး နှင့် CL-9 Linear Fader Controllers, Holmberg သည်သူ၏အသံသည်လှည်းနေတဲ့ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်နှင့် on-the-သွားလာရင်းအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းအားဖြင့်ယင်ကောင်အပေါ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တတ်နိုင်သည်။
"ကျွန်မနေတဲ့ပါပြီ အသံဖုန်းများအတွက် အချိန်ကြာမြင့်စွာပန်ကာ, "Holmberg ကပြောပါတယ်။ "အများစုကဒိန်းမတ်ရုပ်ရှင်စီမံကိန်းတွေကန့်သတ်ဘတ်ဂျက်ရှိသည်, ပုံမှန်အားဖြင့်အဘယ်သူမျှမကဒုတိယယူနစ်အတူအကြောင်းကို 30 နေ့ရက်ကာလ၌သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်နေကြသည်။ ဤသည်တတ်နိုင်သမျှဘက်စုံသုံးနှင့်မိုဘိုင်းလိုအပ်သည်။ ကြှနျတေျာ့ အသံဖုန်းများအတွက် ဂီယာငါ့ကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အသံဖမ်းယူစဉ်ငါလိုအပ်နေရာတိုင်းမှာ go ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။ "
Holmberg ပုံမှန်အားဖြင့်သူ့ကိုအလျင် disconnect လုပ်ဖို့ option ပေးခြင်း, သူ့အသံသည်လှည်းများ၏ထိပ်ပေါ်မှာအသံလေးအိတ်၌ထုပ်ပိုးသည်သူ၏ 788T စောင့်ရှောက်။ မိမိအလှည်းယင်းနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောမော်နီတာ, ဘက်ထရီ, Boosters နှင့်အင်တာနာနှင့်အတူတက်နေတဲ့ အသံဖုန်းများအတွက်'' CL-9 နှင့်အိုင်ပက်®။ သူသည်လှည်းကနေအလျင်အမြန် detach သည့်ကြိုးပေါ်တွင်တင်နှင့်မိုဘိုင်းနေစဉ်နောက်တစ်နေ့မြင်ကွင်းတစ်ခုရိုက်ကူးနိုင်အောင်အဆိုပါ 788T အကြံအဖန်ရှိနေမည်။
ငါအမည်ရရုပ်ရှင်အပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်သောအခါ "ဒီ 788T ငါ့ကိုကျော်အနိုင်ရ တစ်ဦးသည် သာ. ကောင်း၏ရာဌာန၌"Holmberg ကထပ်ပြောသည်။ "ဒါဟာအတော်ကြာနေရာများတွင်ပစ်သတ်ခံခဲ့ရ; နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောအရပ်တို့ကိုနေ့ရက်ကာလ၌။ ကင်ညာနိုင်ငံနေချိန်မှာကျနော်တို့ကအပူများနှင့်အလွန်ချောဖုန်မှုန့်အပါအဝင်အများအပြားစိန်ခေါ်မှုများ, ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ငါအေးစောင့်ရှောက်ကူညီရန်အ 788T န်းကျင်လေထု၏စီးဆင်းမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အသံလေးအိတ်၌ '' နဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင် '' ချပြီးတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဤအစွန်းရောက်သောအခြေအနေများအတွက်အလွန်ကောင်းစွာဖျော်ဖြေအဖြစ်ထုတ်ကုန်ရဲ့ရော့ခ်-အစိုင်အခဲဆောက်လုပ်ရေး, မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသက်သေပြခဲ့သည်။ "
အဆိုပါ 788T အခြားရုပ်ရှင်အပေါ်တစ်ချိန်ကနောက်တဖန်သူ့ကိုမများအတွက်သိသာရွေးချယ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်, လိုတာအချစ်တစ်ခုတည်းပါပဲ။ ဒီထုတ်လုပ်မှုအဘို့, ရိုက်ချက်များ 90 ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းသည်ထက်ခြောက်လသရုပ်ဆောင်များကို featured ။ အနည်းငယ်အရေးပါသောအမြင်ကွင်းများခုနှစ်, အဲဒီမှာအတွက်-and ထဲက frame ရဲ့သရုပ်ဆောင်တွေ၏ကြီးမြတ်သောအရေအတွက်ကိုခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်အသံဖမ်းလင့်ထားသည်ဖို့ option ကို Holmberg လိုအပ်အတိအကျဘာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကလွယ်မှတ်စုမှဝင်ရောက်ခွင့်, လမ်းကြောင်းအမည်များနှင့်အပိုဆောင်း metadata ကိုရဖို့ရန်သူ၏အိုင်ပက်ကိုအသုံးပြုပြီး, တိုးမြှင့်ဖော်စပ်စွမ်းရည်နှစ်ခု CL-788s နှစ်ခု 9Ts အသုံးပြု. ပို. ကြီးမားသောဤမြင်ကွင်းများရိုက်ကူးတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
Holmberg လည်းမကြာသေးမီကဒိနျးမတျရုပ်မြင်သံကြားရှိုးပေါ်တွင်အလုပ်ပတ်ရစ်, Rita, နှင့်၎င်း၏ miniseries spinoff Hjørdis။ "အလျင်မှတ်စုရေးဖို့လိုအပ်ရှိခဲ့သောကြောင့်, ငါ 788T နှင့် iPad ပေါင်းစပ်သုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်" Holmberg ကပြောပါတယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးမှတ်တမ်းတင်ငါ၏အမူလတန်းအလုပ်ဖြစ်သော်လည်း "ငါတို့သည်လည်းကျနော်တို့ကသေနတ်ပစ်ရက်အတွင်းကောက်ယူနိုင်ပါတယ်သလောက်ဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရရှိရန်ကြိုးစားပါ။ ကမှတ်စုများနှင့် metadata မှဝင်ရောက်ခွင့်ဒါလွယ်ကူစေသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါက, အ 788T နှင့်အတူအများကြီးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်၏။ "
အသံဖုန်းများအတွက်'' 788T သူ့ရဲ့ flagship Multi-လမ်းကြောင်းအသံဖမ်းဖြစ်ပါတယ်။ On-တည်နေရာထုတ်လုပ်မှုအသံတစ်ဦးကသက်သေပြဖြေရှင်းချက်သည် 788T ကြောင့်၎င်း၏ကျယ်ပြန့်အသံစွမ်းရည်နှင့်ကြမ်းတမ်းဆောက်လုပ်ရေးမှစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်လျှောက်လုံးဝါရင့်သံကိုပညာရှင်များ၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ 788T ရှစ် Full-featured သွင်းအားစု features များနှင့်အပုဒ် 12 အထိမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဒါဟာမိုက်ခရိုဖုန်းသို့မဟုတ်လိုင်း-Level အချက်ပြမှုများကိုဖြစ်စေလက်ခံ condenser မိုက်ခရိုဖုန်းများအတွက် 48-V ကို Phantom ပါဝါပေးမိုက်ခရိုဖုန်းသွင်းအားစုများနှင့်အင်္ဂါရပ်များကိုအပြည့်အဝချိန်ညှိ High-pass filter များ-အားလုံးတဦးတည်းကျစ်လစ်သိပ်သည်းအထုပ်ထဲမှာအဘို့အအထွတ်အထိပ် Limited ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးတူ 788T, အသံဖုန်းများအတွက် ထုတ်ကုန်စွယ်စုံများနှင့်လယ်ကွင်းထုတ်လုပ်မှု၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစွန်းကိုဆီးတားဖို့ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်သံကိုရောနှောရာမှမျှော်လင့်လာကြပြီဒီကြာရှည်ခံမှုနှင့် function ဖြစ်ပါတယ် အသံဖုန်းများအတွက်.
"အသံဖုန်းများအတွက် ကျနော်တို့ပစ်ခတ်မှုအဆုံးသတ်မယ့်အဖြစ် 688 ပြန်လွတ်လာပေမယ့်ငါပြီးသားတဦးတည်းဝယ်ယူနှင့်ငါ့လာမယ့်စီမံကိန်းကိုပေါ်မှာသုံးပြီးရန်မျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။ အစဉ်မပြတ်ငါငါ့အနှင့်အတူပျော်ရွှင်ပါပြီ အသံဖုန်းများအတွက် ပစ္စည်းကိရိယာများ, ငါမလိုအပ်သောအရာကိုကိုဖမ်းယူဖို့ဂီယာအပေါ်ရေတွက်နိုင်သောကြောင့်။ "
1998 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, အသံဖုန်းများအတွက်, LLC, နှစ်ဦးစလုံးဒီဇိုင်း အသံဖုန်းများအတွက် အသံထုတ်ကုန်များနှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းများအတွက်ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ အသံဖုန်းများအတွက် အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, Episode ရုပ်မြင်သံကြားမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, newsgathering, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-ဖြစ်ရပ်နှင့်အသံစမ်းသပ်မှုနှင့်တိုင်းတာခြင်း application များအတွက်ခရီးဆောင်အသံရောနှော, ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအသံဖမျးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများပေးထားပါတယ်။ ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက်အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီစတူဒီယို applications များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအားကစားနှင့်ဖြစ်ရပ်များအဖြစ်မိုဘိုင်း, တီဗီ, ရုပ်ရှင်နဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဘဏ်ဍာအပါအဝင်ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး၏အကွာအဝေးဖြေရှင်းပေးသောဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်, မော်နီတာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါ အသံဖုန်းများအတွက်, LLC, ဌာနချုပ် Reedsburg, Wisconsin ပြည်နယ်တွင်တည်ရှိသည်။ အပိုဆောင်းရုံးများ Madison, Wisconsin ပြည်နယ်, ချီကာဂို, အီလီနွိုက်ပြည်နယ်နှင့်ဘာလင်, ဂျာမနီမှာတည်ရှိပါတယ်နေကြသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့, သွားရောက်လည်ပတ် အသံဖုန်းများအတွက် နှင့် / သို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုဖုန်းများအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ: www.sounddevices.com နှင့် www.videodevices.com.
isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော အသံဖုန်းများအတွက် တီဗီနည်းပညာ 2015-09-24
ယခင်: 2015 ကို IEEE အသံလွှင့်စာတမ်းဖတ်ပွဲအောက်တိုဘာ 14 အပေါ်ရေဒီယိုပညာရှင်များများအတွက်နှစ်ဦးနည်းပညာဆိုင်ရာ Sessions အထူးပြုလုပ်ပါရန်
နောက်တစ်ခု: Avid S6 နှင့်အတူအရင်းအမြစ်များရောစပ် Sony Pictures Post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများမြှင့်တင်ရန်